Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 12:02 PM0comments
ဖြူလေးဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အိုင်ဒီလေးကို တွေ့တော့ ဇွဲရဲ့ ဂျီမေးလ် အိုင်ဒီမှာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ဖို့ သူ့ကို ဖိတ်ထားလိုက်တယ်….
အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာထိုကိစ္စကို့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်….
ဟာ….. ဖြူလေးဆိုတဲ့ အိုင်ဒီက အင်တာနက်အွန်လိုင်းဖြစ်နေပါလား… နည်းနည်းချက်ကြည့်မှဘဲ…
ဟုတ်ကဲ့.. ကောင်းပါတယ်… ရှင်က ဘယ်ကလဲ….
… ကိုယ်ကရန်ကုန်မှာနေတာ… မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မှာလေ..မင်းကရော
…အော်.. ဒါဆိုရင် ဖြူလေးဆိုတာ မိန်းကလေးပေါ့နော်….
..ကိုယ့်နာမည်က ဇွဲလို့ခေါ်တယ်…...မင်းနာမည်က ဖြူလေးဘဲလား…
အဲဒီလိုဘဲ အင်တာနက်မှာ စကားပြောရင်းပြောရင်း ဖြူလေးနဲ့ ဇွဲတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်တွေ ခိုင်မြဲခဲ့တယ်။
ကျနော်.. သူနှင့် အင်တာနက်မှာ စကားစပြောရတော့.. တိုးညှင်းလွန်းတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အသံအောက်မှာ…. ကျနော်နစ်မြောသွားခဲ့တယ်။
သူဖွင့်ပြထားတဲ့ ၀ပ်ဘ်ကမ် ထဲက နာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဖြူဖြူနဲ့ သေးသေးသွယ်သွယ် သူ့ပုံရိပ်က ကျနော့်ကို အမြဲတမ်းစိုးမိုးထားတယ်…
သေချာပြန်တွေးကြည့်တော့… ဖြူလေးက ဇွဲရဲ့ နှလုံးသားတနေရာမှာ နေရာယူပြီးနေပြီ…
ချစ်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ… သူနဲ့ကျနော် အပြင်မှာ ချိန်းတွေ့ ဖြစ်ကြတယ်…
ဖျော့တော့တော့လေးနဲ့ လှနေတဲ့ ကျနော့ချစ်သူကို ကျနော် ရူးမတတ်ချစ်တယ်…
ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ဖြူလေးကတော့ အမြဲတမ်း.. မတုန်မလှုပ်ပုံစံနဲ့.. ကျနော်သူ့ကို အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်…
အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့… ဖြူလေးရဲ့အသံက နွေးထွေးအသက်ဝင်ပြီး တကယ့်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့….
ချစ်သူသက်တမ်း (၆) လအကြာမှာတော့…
ဇွဲကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ ဖြူလေးကိုမေ့ပြီး ဇွဲကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်မဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာလိုက်ပါတော့….
ဖြူလေးက.. ဇွဲနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူး…. ဖြူလေးတို့ရဲ့ဇါတ်လမ်း..ဒီမှာဘဲ အဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်…
စာတိုလေးကြောင့် ဇွဲ သူ့ကို အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့်ရအောင် အင်တာနက်မှာ တညလုံးနီးပါးစောင့်နေခဲ့တယ်…
သူ့ဆီကစာကို စောင့်ရင်းနဲ့… တပတ်လောက်ကြာသွားခဲ့တယ်… သူကတော့ အွန်လိုင်းမှာပေါ်မလာပါဘူး.. လွယ်လွယ်ချစ်ပြီး..လွယ်လွယ်လမ်းခွဲတတ်တဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး... မုန်းနိုင်၊ မေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပေမဲ့.. ထင်သလောက်မလွယ်ခဲ့ဘူး။
ဟာ.. ငအောင်… ဘယ်သွားမလို့လဲ….
ငါ့ကိုခနလိုက်ခဲ့ပေးပါဦးကွာ… အစ်မက သွားစရာရှိလို့တဲ့…. သူ့ကိုထားခဲ့ပြီး.. မင်းနဲ့ငါနဲ့.. အတူတူပြန်လာမယ်.. ပြီးမှ.. မောင်မျိုးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အတူသွားရအောင်..
ကျနော့်ရင်ထဲ ဒုတ်ခနဲ့တုန်သွားတယ်….အေး.. ဒါဆိုလဲသွားရအောင်လေ..
ကားပေါ်မှာ.. ငအောင်က မောင်မျိုးရဲ့ သတို့သမီးအကြောင်း မရပ်မနားပြောနေလေရဲ့…
ဟေ့ကောင်.. ငမျိုးရဲ့ကောင်မလေးက လှလိုက်တာကွာ.. ဖြူဖြူလေး…
ဖြူဖြူလေးဆိုတော့.. ဖြူလေးပုံစံကို ဖျတ်ခနဲ မြင်ယောင်လိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…
အင်းစိန်ရောက်တော့… ငအောင်ရဲ့ အစ်မက..
ရပ်..ရပ်.. ဒီမှာဘဲ..ရပ်တော့.. ဟုဆိုကာ.. အလျင်စလိုပင် ကားပေါ်မှဆင်းသွားလေသည်။
အစ်မ.. အစ်မ.. အိတ်ကျန်နေပြီလေ… အာ.. ဒီအစ်မတယောက်လဲ.. ကိုယ့်ပစ္စည်းတောင်..ကိုယ်မေ့နေတယ်… သွားလိုက်ပေးရဦးမယ်… ငဇွဲ..မင်းပါလိုက်ခဲ့… မင်းပါမှ.. ငါလည်း ပြန်ထွက်လို့လွယ်မှာကွ..
အေးပါကွာ.. မြန်မြန်လုပ်.. ငမျိုးမင်္ဂလာဆောင်နောက်ကျနေဦးမယ်…
ခြံထဲရောက်တော့.. လူတွေက ရှုတ်ရှပ်ခတ်လို့နေသည်။ ဘာပွဲလုပ်မလို့ပါလိမ့်ဟူသော အတွေးမှမစခင်…
ငယ်ငယ်လေးနဲ့..သနားစရာလေးနော်… သူ့ရည်းစားသာရှိရင်တော့.. တော်တော်နှမြောမှာဘဲ… ဟူသော စကားတွေကြောင့် ဒီအိမ်မှာ ၀မ်းနည်းစရာ တခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ.. သိလိုက်တယ်…
အိမ်ထဲဝင်သွားသော ငအောင့်အစ်မကို အထုပ်လိုက်ပေးဖို့အတွက် အိမ်ထဲဝင်သွားတော့.. ဇွဲရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လှမ်းလို့မရအောင် ရပ်တန့်သွားစေခဲ့တာက သေဆုံးသူရဲ့ အလောင်းပင်….
ဖြူလေး….ဘုရား..ဘုရား.. မဟုတ်ပါစေနဲ့… (ချစ်သူနဲ့ မပေါင်းဖက်ရပေမဲ့လည်း… ကျနော် အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကို ယခုလို ပုံစံနှင့် မမြင်လိုပါ..)..
နှမြောစရာကြီးမဟုတ်လား ငဇွဲ… သူက ငါ့အစ်မ..သူငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးလေ… ရောဂါသည်လေးမို့.. တအိမ်လုံး.. ပိုးမွေးသလိုမွေးထားတာ… သေမဲ့ရက်ကို ထိုင်စောင့်နေရရှာတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့… လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကမှ ပိုဆိုးလာလို့ ဆေးရုံမှာတင်ထားတာ မနေ့ကဘဲဆုံးတာလေ….
ဇွဲရဲ့နားထဲ ၀င်တချက်မ၀င်တချက်နဲ့… မြင်ကွင်းထဲမှာလဲ ဖြူလေးရဲ့ လဲလျောင်းနေတဲ့ ရုပ်ပုံလွှာ… နှလုံးသားကို ဓါးနဲ့မွှန်းနေသလို… တစစ်စစ်နာကျင်လျှက်.. ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးမိတော့တယ်….
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:51 PM0comments
တကယ်တမ်းဆိုရင်…. ဒီရင်သွေးရဲ့ အဖေဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို … နည်းနည်းလေးမှ ထည့်မစဉ်းစားမိနေဘူး….
သူကကြည်ဖြူ့ကို…. ဂရုစိုက်ပေမဲ့… ကလေးကိုတော့ တသက်လုံး… ပြုစုပျိုးထောင်သွားချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးလည်း မမြင်ရပါဘူး….
သူက… “ကိုယ်က.. အိမ်ထောင်တခုလုံးကို…
မိဘတွေပို့လာတဲ့ ကျောင်းစရိတ်တောင် အလျှင်မှီအောင် မနည်းသုံးနေရတာ…
အပိုငွေ ဘယ်မှာရှိပါ့မလဲ….ကြည်ဖြူရယ်” …..
တချိန်တုန်းက…. ကိုယ်တို့အတူနေရင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ… သူတောင်းဆိုခဲ့ဘူးတဲ့… မိသားစုဆိုတဲ့ အခြေအနေတခုက သူညည်းပြသွားခဲ့တဲ့…. ဘူး …တွေရဲ့… အောက်မှာ…
ဒီအချိန်မှာ… သူ့ရဲ့စကားတွေ သူပြောသမျှတွေကို ဗိုက်ကလေး ပွတ်ပြီး ပြုံးပြုံးလေးဘဲ နေရင်းနဲ့ …. ဘာတွေပြောသွားမှန်းကို မသိဘူး…..နားထဲမှာလည်း မကြားခဲ့ဘူး…..
ဘယ်သူတွေ.. တာဝန်ယူယူမယူယူ…. ကိုယ့်အသွေးထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့… ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေးကိုတော့ … ကြည်ဖြူ..လက်လွတ်စပယ်..မလုပ်ပစ်ချင်ဘူး…
ဒါပေမဲ့.. သူ့ကို ကြည်ဖြူနောက်ဆုံးစကားတခွန်းကိုတော့ အပြုံးမပျက် ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်….
“ကို… ဒီကလေးကို.. တာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ ပြောချင်တာလား…..
ကြည်ဖြူကတော့ ဒီကလေးကို မွေးမယ်….
ဒါပေမဲ့ တခုတော့ရှိတယ်…. တချိန်ကျမှ… ဒါကိုယ့်ကလေးပါဆိုပြီးတော့… အရန်သင့် အမည်လာခံတာမျိုးတော့ ကြည်ဖြူခွင့်မပြုနိုင်ဘူး…. ”
“ ဒါတွေဟာ.. ကြည်ဖြူ.. ကို့ကို မုန်းလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး… ကို့သဘောပါ…
သူရွေးချယ်မဲ့ လမ်းကို… ကြည်ဖြူကြိုတွေးပြီးသားမို့လို့….. တအားတော့မခံစားရပါဘူး…
သူ.. ကြည်ဖြူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို.. စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပုံစံနဲ့…. တချက်ကြည့်တော့… သူ့ကိုအဖြူစင်ဆုံးပြုံးပြခဲ့တယ်…
သူ.. ကြည်ဖြူ့ကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ်….
ကျန်ခဲ့တဲ့ ကြည်ဖြူကတော့…. လွယ်ထားရတဲ့ ရင်သွေးငယ်ကပေးတဲ့ ခွန်အားတွေနဲ့… အဓိပ္ဖါယ်ရှိတဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို ဖြတ်သန်းဖို့အတွက်.... ခြေလှမ်းသစ်တွေပြင်ရင်း…
သူရှိမှ အရာအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..... သူ...မရှိလည်း ဒါတွေကို ကြည်ဖြူရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်လေ.....
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 4:53 PM0comments
အေးချမ်းတဲ့ မြို့ လေးတစ်မြို့ မှာ
နေထွက်၊ နေ၀င်ချိန်ကို သွားကြည့်ကြတယ်။
သူတို့ကမြင်သူတကာ အားကျတဲ့ စုံတွဲလေးပါ။
ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ မတော်တဆ ကားတိုက်မှုကြောင့် ကောင်မလေး အပြင်းအထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပြီး မေ့မျှောသွားခဲ့တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာပဲ ငြိမ်သက်စွာလဲလျောင်းနေရတယ်။
နေ့ဖက်ဆိုရင် ကောင်လေးက ကောင်မလေးနားမှာနေပြီးသူ့နာမည်ကို တတွတ်တွတ် ရွတ်ခေါ်တယ်။ ညဖက်ဆိုရင် ဘုရားကျောင်းသွားပြီး ကောင်မလေး ကျန်းမာလာစေဖို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းတယ်။
အချိန်တွေ တဖြေးဖြေးကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီး ကောင်လေးခမျာ ငိုရလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတောင်
ကောင်မလေးက မေ့မျှောနေဆဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးလက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းမြဲ ဆုတောင်းတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ညမှာ ဘုရားသခင်က ကောင်လေးရဲ့ မလျှော့တဲ့ ဇွဲနဲ့ကောင်မလေးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် သူ့အပေါ် သနားသက်ဝင်ပြီးမျှော်လင့်ချက် တစ်ခုပေးလိုက်တယ်။
ဘုရားသခင်က ကောင်လေးကို " ကောင်မလေးရဲ့အသက်ကို ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ လှဲလှယ်နိုင်မလား" လို့ မေးတယ်။ ကောင်လေးက
"ဒါဆိုကောင်းပြီ။ ကောင်မလေး အမြန်နှိုးလာဖို့ အသင် ပုစဉ်းဘ၀နဲ့သုံးနှစ်အသွင်ပြောင်းရမယ်။ သဘောတူနိုင်လား" လို့ ဘုရားသခင်က မေးပြန်တယ်။
မိုးလင်းတာနဲ့ ကောင်လေးဟာ ပုစဉ်းတစ်ကောင် အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ပုစဉ်းလေးက ဆေးရုံဖက်ကို အလျှင်အမြန် ပျံလာတယ်။ လူနာခန်းထဲ ၀င်ကြည့်တော့ ကောင်မလေးက နှိုးနေပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ စကားပြောနေတာကို တွေ့တယ်။
သူတို့ပြောနေတာတွေကို ပုစဉ်းက မကြားရဘူး။ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်နေတော့ ကောင်မလေး ကျန်းမာလာပြီး ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမပျော်ဘူး။နေရာအနှံ့ ကောင်လေးကို လိုက်စုံစမ်းတယ်၊ လိုက်ရှာတယ်။
ကောင်လေး ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ ကောင်လေးက ပုစဉ်းအသွင်နဲ့ကောင်မလေးဘေးမှာ ရစ်ဝဲ ပျံသန်းနေပေမဲ့ ကောင်မလေးကို သူခေါ်လို့ မရဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နွေရက်တွေ တဖြေးဖြေး ကုန်လွန်ပြီး ဆောင်းဦးကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ဆောင်းလေညင်းတွေကြောင့် သစ်ရွက်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေကုန်တယ်။ ပုစဉ်း
ဒီနေရာက ခွာရတော့မယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြင့် ကောင်မလေးရဲ့ပုခုံးထက်နားကို သူအရဲစွန့်ပြီး သွားနားလိုက်တယ်။ နူးညံ့တဲ့ တောင်ပံနဲ့
ကောင်မလေးရဲ့ ပါးပြင်ကို ထိလိုက်တယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ပုခုံးသားကို ရှိုက်နမ်းလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး သတိမထားမိခင်မှာ သူတိတ်တဆိတ်
မျက်စိတမှိတ်အတွင်းမှာပဲ နွေဦးရာသီကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ နွေရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲ ပုစဉ်းဟာ ကောင်မလေးနားကို အရောက်ပျံသန်းလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့
သူရင်းနှီးတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ဘေးမှာ ခန့်ညားတဲ့ သူစိမ်းကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသူ တွေ့လိုက်တော့ ပျံသန်းနေတဲ့ သူ့တောင်ပံတွေ လေဟာနယ် တ၀က်တပျက်မှာ
လူတွေက ကောင်မလေး ကားတိုက်ခံရတာ ဒဏ်ရာတွေ ဘယ်လောက် ပြင်းထန်ကြောင်း၊ဒဏ်ရာတွေကို ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ ကောင်မလေးအပေါ် ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်ကြောင်း၊
သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေက စံတင်ထိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ကောင်မလေး ဘ၀က အရင်လိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောသံတွေကိုပုစဉ်းကြားလိုက်ရတယ်။ ပုစဉ်း ရင်ကွဲရပြန်တယ်။ ဆရာဝန်ကောင်လေးနဲ့
ကောင်မလေး ပင်လယ်ဘေးသွားပြီး နေ၀င်၊ နေထွက်ကြည့်တာကို သူအမြဲတွေ့နေရပေမဲ့တစ်ခါတလေ ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးထက်မှာ ခဏသွားနားတာကလွဲလို့ သူဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ပုစဉ်းလေးဟာ ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားရင် ဒီနှစ်နွေဟာခါတိုင်းနွေထက် ပိုရှည်လျှားနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကောင်မလေးနားမှာ
ရစ်ဝဲပျံသန်းဖို့လည်း သူမှာ ခွန်အားတွေ ဆုတ်လျော့နေတယ်။ဆရာဝန်ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တီးတိုးစကားပြောသံနဲ့ ရယ်သံတွေက သူ့ကိုအသက်ရှုကျပ်စေတယ်။
သုံးနှစ်မြောက် နွေရာသီမှာတော့ ပုစဉ်းဟာ ကောင်မလေးကို ခဏခဏသွားမကြည့်တော့ဘူး။ သူနားနေကျ ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးကို ဆရာဝန်ကောင်လေးက
တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်ထားတယ်။ သူ့တောင်ပံနဲ့ ထိနေကျ ကောင်မလေးရဲ့ပါးပြင်ဟာလည်း ဆရာဝန်ကောင်လေးက တယုတယနမ်းနေတယ်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲတစ်ကောင်က
သူ့တို့ဘေးမှာ ရစ်ဝဲနေတယ်ဆိုတာကို ချစ်တင်းနှောပြီး ကြည်နှုးနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်မလေးကလည်း အတိတ်ဆိုတာကိုလုံးဝ သတိမေ့သွားခဲ့ပြီလေ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ (၃)နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကိုရောက်ဖို့ တစ်ရက်အလိုမှာကောင်မလေးနဲ့ ဆရာဝန်ကောင်လေးတို့ လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲ
သူပျံဝင်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးထက်မှာ နားလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ဆရာဝန်ကောင်လေးရဲ့ ဘုရားသခင်ထံ သစ္စာခံယူနေတဲ့ အသံကို သူကြားလိုက်တယ်။
ဆရာဝန်ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ လက်ကို လက်ထပ်လက်စွပ် စွပ်ပေးပြီးနမ်းလိုက်တာကို သူငေးကြည့်နေမိတယ်။ သူ့ပါးပြင်ငယ်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေစီးကျလာခဲ့တယ်။
တစ်ချို့ကံတရားက လက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့ စီရင်လာပြီးသားပါ။ တစ်ချို့ဖူးစာကပေါင်းစပ်ဖို့ ကံပါမလာခဲ့ဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တာ ရယူပိုင်ဆိုင်မှ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်တော့ကောင်းကောင်း တန်ဖိုးထား ချစ်တတ်ရမယ်"
သင့်ရဲ့ ပုခုံးပေါ်မှာရော ပုစဉ်းလေးတစ်ကောင် နားခဲ့ဖူးသလား..
(မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်းတယောက် အီးမေးလ်မှ ပို့လာသော ဇာတ်လမ်းအား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်)
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 2:28 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 4:31 PM0comments
ကမ္ဘာပျက်စေခဲ့တဲ့ ဧပြီ (၁၀) ရက်
ဖေဖေကလည်း ကျမကို ခေါ်သွားလို့ရရင် ခေါ်သွားလေ့ရှိပါတယ်...
ကျမရဲ့ဖေဖေက... ကျမတို့မိသားစုကို.... အရမ်းချမ်းသာအောင် မရှာဖွေပေးနိုင်ပေမဲ့.... နေဖို့စားဖို့လုံလောက်တဲ့... လူလတ်တန်းစားထဲမှာ ကျမတို့မိသားစုက အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး.. အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုလေးတခုကို ဖေဖေက ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်....။
အရက်သောက်တတ်တဲ့ ဖေဖေက ညနေအိမ်မပြန်လာတိုင်း... မေမေက ကျမကို လိုက်ခေါ်ခိုင်းလို့... ရွာထဲက အရက်ဆိုင်တွေဆီ နှံ့နေအာင် သွားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်စဉ်းစားရင်... ဒီအချိန်မှာ ရှက်သလိုလိုဖြစ်မိပေမဲ့.... အဲဒီတုန်းက..ကလေးသဘာဝ.. ဖေဖေ့ဘေးမှာ ထိုင်ရင်း အမြည်းစားပြီး...ဖေဖေ့ကို စောင့်နေရတာကိုက ကျမပျော်နေခဲ့တာဘဲ.....။
ညဘက်တွေဆိုရင်... ဖေဖေက ၀တ္ထုတွေဖတ်တဲ့အခါတိုင်း... စာမကျက်ဘဲ...ဖေဖေ့ဘေးမှာ အတင်းဝင်ပြီး ၀တ္ထုလိုက်ဖတ်ခဲ့တဲ့ ညတွေကိုလည်း မှတ်မိသေးပါရဲ့ဖေဖေရယ်....။
ကျမ ငါးတန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးလို့... နွေရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ... ကျမတို့ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကို... ကံကြမ္မာမုန်တိုင်းက တိုက်မှန်းမသိတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်....။
ဖေဖေစပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ... ဖေဖေအရမ်းကြိုက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို မနက်စာကျွေးပြီး ဆေးတိုက်တော့...ဖေဖေမစားနိုင်ခဲ့ဘူး...။
ကလေးသာသာရှိသေးတဲ့ကျမကတော့... ဖေဖေမစားနိုင်တဲ့ အသီးတွေ.. မုန့်တွေကို စားရလို့.. ပျော်နေခဲ့တာကို စဉ်းစားတိုင်း... စိတ်ထဲမှာ ဒေါသထွက်မိတယ်....။
ရင်တွေအရမ်းပူလို့ဆိုပြီး... ရေပုလင်းကို အမြဲတမ်းဖက်တွယ်ထားတတ်တဲ့ဖေဖေက... သစ်တိုသီးစားချင်တယ်ဆိုလို့... သားအဖနှစ်ယောက်.. သစ်တိုသီးအကင်းတွေကိုကောက်ပြီး... ဆားအစပ်တွေနဲ့တို့စားကြတာလဲ မြင်ယောင်နေမိသေးတယ်...။
အဲဒီတစ်ညမှာတော့....ဖေဖေနေမကောင်းလို့ဆိုပြီး... ကျမတို့ညီအစ်မတွေအားလုံး... ဖေဖေ့ဘေးမှာ မေမေကခေါ်သိပ်လို့အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ....
ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့.. မနက် (၃) နာရီထိုးမှာ... မေမေ၊ ဒေါ်လေးနဲ့ ဦးလေးတို့... ပျာပျာသလဲနဲ့... ဖေဖေ့ကို ဆေးရုံခေါ်သွားတော့.... ကျမက ဒီနေ့ဖေဖေ ဆေးရုံရက်ချိန်းရှိလို့ သွားကြတယ်ပေါ့.....။
အဲဒီတစ်နေ့လုံး.... အဖိုး၊အဖွား.. ဦးတွေ၊အဒေါ်တွေ...အားလုံးအလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်...။
အဖိုးကဆေးရုံကိုလိုက်သွား.... အဒေါ်တွေက စွပ်ပြုတ်တွေပြုတ်ပေါ့....။ ကျမတို့ကတော့ ဖေဖေဆေးရုံတက်လို့.. သက်သာသွားရင်.. ပြန်လာမယ်လို့ဘဲ.. ယုံကြည်ခဲ့တယ်....။
အဲဒီညက... ကျမတို့ညီအစ်မတွေ.... အဒေါ်အိမ်မှာသွားအိပ်ခဲ့ရတယ်....။ ဒါပေမဲ့.. ည (၁၁) နာရီထိုးလောက်မှာ.... ဆေးရုံလိုက်သွားတဲ့ အဒေါ်က ရောက်လာပြီးတော့..
...အိမ်သော့ပေး... ကလေးတွေပါခေါ်ခဲ့တဲ့... သူတို့ပြန်လာကြပြီ....
...သမီးတို့ ထကြ... ထကြ.. အိမ်ပြန်ရအောင်....
ကျမတို့ညီအစ်မတွေအားလုံး... အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့.. အိမ်ပြန်ရောက်သွားတော့.. ဖေဖေ့ကို ဆေးပုလင်းတန်းလန်းနဲ့..တွေ့ရတယ်... အိမ်မှာလည်း လူစုံတက်စုံပေါ့...။
မေမေကငိုနေလို့... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီး... တချက်တော့ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပေမဲ့.... မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတဲ့... ဒေါ်ငယ်ဘေးမှာသွားထိုင်တော့... ဒေါ်ငယ်က ဆန်ပြုတ်ပြုတ်နေတယ်...
ကလေးဖြစ်ပေမဲ့.... ဖေဖေ့ရဲ့ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းကြောင့် ကျမအိပ်လို့မရခဲ့ဘူး..... အမှန်အတိုင်းပြောရရင်... အဲဒီအသက်ရှူသံတွေကို... ကြောက်လဲကြောက်နေခဲ့တယ်.... ပင်ပင်ပန်းပန်းအသက်ရှူနေရတဲ့... ဖေဖေ့ကိုလဲ သနားတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဘဲ..မိုးလင်းလာတယ်.... ဖေဖေ့ရဲ့အသက်ရှူသံတွေက ပိုကျယ်လာတယ်.... အဲဒီအချိန်မှာ... ကျမစပြီးတော့..တကယ်လို့ဖေဖေသာ... ငါတို့မိသားစုကို.. ခွဲသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးကို....တွေးလာတယ်....။
ကျမ အရမ်းကို တုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်... ကျမဘ၀မှာ တခါမှမတွေးဖူးခဲ့တဲ့အတွေးမို့... ဘာလုပ်ရ..ကိုင်ရမှန်းမသိဘဲ....မျက်ရည်တွေနဲ့.... ဘုရားစင်အရှေ့မှာ... ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိခိုးပြီး..ဆုတောင်းနေခဲ့မှန်းတောင် ... မမှတ်မိတော့ဘူး....။
ဒါပေမဲ့ ကလေးဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့ဆုတောင်းကိုဘဲ... ဘုရားကအလေးမထားတာလားတော့မသိဘူး...
မနက် (၆) နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့... ဖေဖေ့ဆီက ဆေးပုလင်းတွေကိုဖြုတ်လိုက်ကြတယ်....။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမကအိမ်ရှေ့ဘုရားခန်းထဲမှာပေါ့.... ဖေဖေ့အသက်ရှူသံတွေတိုးသွားလို့... ဖေဖေ.. သက်သာလာပြီအထင်နဲ့... အခန်းထဲကို ပြေးဝင်ကြည့်တော့... မေမေက ဘေးနားမှာငိုလို့... အဖိုးနဲ့... အဖွားက မေမေ့ကို...
....သူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်သွားပါစေ... သမီးတို့ရဲ့ငိုသံတွေကို... သူမကြားပါစေနဲ့.... တဲ့....
ဒီတခါမှာတော့... ကျမအဖြစ်က ရိပ်မိတော့ တခင်းကုန်နေပြီဆိုသလိုမျိုး.... ကျမအကြောက်ဆုံးတနေ့တနေ့ရဲ့ မြင်ကွင်းကို ဘာမှမသိလိုက်ပါဘဲ... ရောက်ခဲ့တယ်...။
ကျမကိုအရမ်းချစ်တဲ့ဖေဖေက... မျက်စိတောင်မဖွင့်နိုင်ဘဲ... တဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားသလို.... ဘုရားစင်ရှေ့မှာ ကန်တော့ရင်းနဲ့... ကျခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ မျက်ရည်တွေလည်း.... အဲဒီနေရာမှာဘဲ ခမ်းခြောက်သွားခဲ့တယ်....။
ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေထဲကလို.... ကျမ..မေ့လဲမကျသွားပါဘူး...။ ဒါပေမ... ဖေဖေ့ရဲ့ ပုံရိပ်... လူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု... မေမေ့ရဲ့ အငိုမျက်နှာ... မြင်ကွင်းအားလုံးက... ကျမနှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးတစ်နေရာမှာ...
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:21 PM 1 comments
ငါတို့ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြတယ်... ချစ်သူစိတ်ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ပေါ့...
မထင်မှတ်တဲ့ ပြသနာတွေ... တခုပြီးတခုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာ... ငါက အားလုံးကို မင်းနဲ့အတူရင်ဆိုင်... ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ပြတ်ပြတ်သားသားအံတုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာ... နင်ကတော့ နင့်အတွက်နဲ့.. ငါရင်ဆိုင်ရမဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအတွက်... တိတ်တိတ်လေး အဝေးကိုထွက်ခွာသွားဖို့... ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်...
...ချစ်သူရယ်.. အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့...အသံငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ နင်ပြောလာပေမဲ့.. ငါရင်ထဲမှာ တခုခုကို သိနေသလိုရှိခဲ့တယ်...
အဲဒီညမှာ... ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး အရမ်းဝမ်းနည်းလွန်းပြီး.. စကားဆက်မပြောနိုင်ဘဲ...ဖုန်းချဖြစ်ခဲ့တယ်နော်...
...အဲဒီနောက် ငါခဏလေး အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ.. နင်ငါ့ဆီကို ဖုန်းပြန်ဆက်ခဲ့တယ်.... နင်ငါ့ကို အိပ်နေလားလို့မေးပြီးတော့... ငါပေးထားတဲ့ ကျောက်စိမ်းပြားလေးးကို ပြန်မပေးတော့ဘူးနော်ဆိုပြီး.. ငါ့ကိုစသလိုလိုနဲ့နင်ပြောတယ်...
...ပြီးတော့.. ချစ်သူ..နောက်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရမယ်နော်လို့ နင်ပြောလိုက်ချိန်မှာ... ငါသိနေသလိုရှိခဲ့တဲ့အရာ သေချာသွားသလို... ဒါမှမဟုတ်... တစုံတယောက်က ငါ့ကိုတိုက်တွန်းနေသလိုမျိုး...
အဲဒီအချိန်မှာ.. တိတ်သွားတဲ့ နင့်အသံကြောင့် ငါ့အထင်တွေပိုပီပြင်လာတယ်... ငါတို့နှစ်ယောက် ဝေးကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့.. မသွားပါနဲ့လို့.. ငါနင့်ကို တောင်းဆိုမိတယ်... ကတိပေးဖို့လည်း ငါနင့်ကိုပြောမိတယ်...
ငါ့အပေါ်မလိမ်ချင်တဲ့နင်ကလည်း... အဲဒီကတိကိုတော့ နင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့.. နင်တိတ်တိတ်လေး စီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေကို ၀န်ခံခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်...
အဲဒီအချိန်.. ငါဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုသံတွေကို... နင်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်.. မငိုပါနဲ့ချစ်သူရယ်..ဆိုတာကလွဲပြီး.. ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ...
ငါအတန်တန်တောင်းပန်နေပေမဲ့.. ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီး နင်ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေကို.. နင်အရှုံးမပေးချင်လို့... နင်လည်း အလျော့မပေးခဲ့ဘူးမဟုတ်လား..
အဲဒီတော့.. ငါ့ငိုသံတွေရပ်ပြီး.. နင်သွားချင်ရင်သွားပါ... ဒါပေမဲ့.. နင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်.. ငါ့ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုမစိုက်ဘူး.. ထမင်းလဲ ပုံမှန်မစားဘူး... ဗိုက်အောင့်တတ်တဲ့ ငါ့ကို ငရုပ်သီးတွေမစားဖို့တားတာကိုလဲ နားမထောင်တော့ဘူး.. .အလုပ်သွားရင် ကားလမ်းအကူးကို အမြဲစိတ်ပူတတ်တဲ့ နင့်ကို... လမ်းလဲ ကူးချင်သလိုကူးမယ်ဆိုပြီး.. ငါပြောတော့...
...အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့ချစ်သူရယ်..ချစ်သူအတွက်ကောင်းပါစေဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆို... ချစ်သူတခုခုဖြစ်ရင်...ဘယ်လိုမှ ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့...နင်ဝမ်းနည်းလို့.. ငိုခဲ့တယ်နော်...
အဲဒီအချိန်... ဒါဆိုရင်မသွားနဲ့လို့..ငါပြောတော့... နင်အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးမှ...
အဲဒီအချိန်ကနေစပြီး.. ငါတို့နှစ်ယောက် အခက်အခဲမှန်သမျှရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်နော်..
...ချစ်သူရယ်..လောကမှာဖြစ်ချင်တာရှိရင် ကြိုးစားရင်ရပါတယ်... ဆုံဆည်းချင်ရင်လဲ... ဆုံးဆည်းအောင်ကြိုးစားမယ်လို့..ဆုံးဖြတ်ထားရင်.. အဆုံးသတ်မှာ.. ငါတို့နှစ်ယောက်အတူလက်တွဲရမှာပါ...။
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 11:30 AM0comments
၁၉ ဇူလိုင်.. အာဇာနည်နေ့အတွက်
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ မြို့တော်ခန်းမတွင်..
နိုင်ငံရေးဆိုတာက တခါတရံမှ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့...
နားထောင်တဲ့လူက နားထောင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူး...
အမြဲတမ်းအားဖြင့်... တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့.. တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ...
မိမိတို့ရဲ့ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အကျိုးတွေကို... ဆိုင်သလိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကာ...
မိမိတို့ ပြသနာတွေကို လုပ်ပြီးတော့ကာ...
ဖြေရှင်းရန်အတွက်.. အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်...။
၁၉၄၅.. သြဂုတ်လ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှ..
ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ကိစ္စကို တိုင်းသူပြည်သားတွေကို..
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 10:15 AM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 9:24 AM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 7:04 AM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 3:42 PM0comments
ပြည်သူ့သားကောင်းဆိုလျှင်တော့.. ပြည်သူသာလျှင်အမိ.. ပြည်သူသာလျှင်အဖဘဲဖြစ်ရမယ်..
မြန်မာပြည်က...ဘိုးဘိုး.. အာဏာရူးကြီး.. မှူးကြီးသန်းရွှေကတော့..
တပ်မတော်သာအမိ.. တပ်မတော်သာအဖလို့သာအော်နေပြီ... ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကူလည်းမကူညီဘူး.. သူများကူတာကိုလည်း လက်မခံဘူး...
အခုမြန်မာပြည်မှာ စစ်သားက သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတယ်.. သိန်းနဲ့ချီတဲ့ မိသားစု... ဆွေမျိုးတွေဟာလည်းဘဲ.. ဒီဒုက္ခတွေကို ခံစားနေကြရတယ်..
တကယ်တမ်းဆို တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေဘ၀.. အေးချမ်းဖို့အတွက်.. အကာအကွယ်ပေးတဲ့.. မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေကြသူတွေပါ..
ဒါပေမဲ့... အရူးကြီး သန်းရွှေက.. အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းတယ်.. အကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို.. သုံးပြီးတော့... ကိုယ်ကျိုးအတွက်.. လုပ်စားနေတာ...
အခုဆိုရင်... သူလည်းတော်တော်ချမ်းသာလို့.. သမီးဖြစ်သူကိုတောင်.. စိန်စီတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတခုလုပ်ပေးနိုင်သလို... ပြည်သူတွေလဲ.. အတော်ကိုအခက်အခဲ ကြုံနေရပါပြီ..
ဒါတွေအားလုံးကို... မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူကမွေးတဲ့ ပြည်သူ့သား.. စစ်သားတွေလည်း သိကြပါတယ်...
အဲဒါကြောင့်...ကိုယ့်ရဲ့ တကယ့်မိသားစု.. ဆွေမျိုးတွေနဲ့ မားမားမတ်မတ်.. ရပ်တည်ပြီး.. အမှန်တရားနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ဘ၀တွေရဖို့အတွက် ပြည်သူတွေနဲ့ လက်တွဲဖို့ကို ပြည်သူတွေကနေ.. လက်ကမ်းလို့ စောင့်ကြိုနေလျှက်...
အတူလက်တွဲပြီး.. မိသားစုတိုင်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နိုင်ငံလေးတခု တည်ဆောက်လိုက်ရအောင်။
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 4:00 PM0comments
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 9:40 AM0comments
သတင်းကို မနားထောင်ဘဲနေခဲ့တယ်... ကျမ စိတ်မကောင်းစရာတွေကို တွေ့ရမြင်ရတာတွေများပြီးတော့ မမြင်ချင်တော့ဘူး...
ဒါပေမဲ့... ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တော့ မနေနိုင်ဘူး.. အီးမေးလ်မှာတွေ့တော့ဖွင့်ကြည့်မိကာမှ.... ရှိတဲ့အားကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်စေတာက... အသက်ပျောက်နေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အလောင်းတွေပါ..
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရကတော့ သူတာဝန်မယူနိုင်လို့ပစ်ထားတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အခြားနိုင်ငံကလှူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုတောင် လူတွေဆီကို မဝေပေးဘဲ...
ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ထည့်သိမ်းထားတာကို တကယ်ပါဘဲ.. အံ့သြလို့ကို မဆုံးဘူး....ပြီးတော့ ဒီလောက် အရေးတကြီး အစားအစာတွေ၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေ လိုနေတဲ့အချိန်မှာ..
ဘာကိစ္စနဲ့ ဂိုဒေါင်ထဲထည့်ပြီး အလှကြည့်နေတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရဘူး....
သူများနိုင်ငံက ပို့လာတဲ့ ပစ္စည်းမပြောနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့ ရှိတာလေးတွေ ဝေငှတာတောင် နိုင်ငံတော်ကို အရှက်ရစေတယ်၊ သိက္ခာချတယ် ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတယ်....။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျတော့ မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့...။
ကိုယ့်နိုင်ငံကမဟုတ်တဲ့ အခြားနိုင်ငံသား ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးက လူတွေတောင် မုန်တိုင်းမိလို့ ငတ်နေတဲ့လူတွေ... ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကို သနားပြီး အကူအညီတွေပေးနေတာ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရလုပ်နေတဲ့ သူတို့တွေက ဘာလို့အဲဒီလောက်တောင် အကြင်နာနည်းကြတာလဲ...
ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ နအဖ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သားသမီးဆွေမျိုးတွေရှိရဲ့သားနဲ့ ဒီလောက်ကိုယ်ချင်းစာမှုနည်းတာ... လူတွေမှဟုတ်ကြရဲ့လား.... ငါတို့နိုင်ငံကလူတွေ တရိစ္ဆှာန်အရိုင်းအစိုင်းတွေရဲ့ အာဏာရူးသွယ်မှုအောက်မှာ အလူးအလဲခံနေကြရပြီ... အဲဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ငါတို့နိုင်ငံကို အပြောင်းအလဲတခုလုပ်ဖို့ လိုနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေတာပါဘဲ...
နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် အေးချမ်းပြီး.. နေချင်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် အနာဂါတ်မှာ ကျန်ရစ်နေအောင်... ငါတို့အတူတူ တိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်...။
Posted by ရေတစက်ကြောင့် at 4:44 PM0comments